ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: မောင်ကြီးတို့ ဘယ်ရွာသား ...
ဟန်နီဦး ရေကူး ဝတ်စုံတောင် ပါလိုက်သေးတယ်။ :D
ဟန်နီဦး ရေကူး ဝတ်စုံကို မသိလိုက်ဘူးဗျာ.. ခေတ်နောက်ကျသွားပြီ။
' စစ်မှာတမူ' '-------> 'မောင်ကြီးတို့ ဘယ်ရွာသား ' :D
လိုက်လို့ မှီနိုင်တော့ဝူးဗျာ.. ဒဂယ်..
အမည်နဲ့ ဆန်ကျင်ဖက်မို့ မရိုသေမလေးစားဘဲကိုမနေနိုင်
Dear Ko Paw, love your poem.
singasong said...
မောင်ကြီးတို့ ဘယ်ရွာသား ..အာ..အာ
ဒေါ်လာစား လော ? သူတောင်းစား လော ?
Good post, Brother Paw!!!!
I disagree with you for some of
your opinions but this isareal good shit :D). My compliments and cheers!
ဟန်နီဦးရေကူးဝတ်စုံ ကို ကျွန်တော်လည်း သိဘူးဗျ။
နောက်ဆက်တွဲ ရှင်းလင်းချက်လေးတော့ လုပ်ပေးပါဦး....။
>>>> SDL နဲ့ မောင်လေး.....
အား....ခေတ်နောက်ကျလိုက်တာဗျာ။ တကယ် သိချင်တယ်ဆိုရင်.... အယ်ဒီချာ့ အာပေါလောတွေကို ယူကျုကတဆင့် တင်ဆက်ပြီး မျက်စိနဲ့နားကို နှိပ်စက်နေသော... ကေသာအရှည်...သေနာဝတီ....အဲလေ... ငွေရှာဝတီ...အွန်လိုင်း မဂ္ဂဇင်းကြီးတွင် သွားရောက် လှန်လှော ဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်းပါ။
မွေးကတည်းက စောင်းနေသူတစ်ယောက် ကြိုးစားပြီး ထပ်စောင်းသွားသည်။
တိုက်ပွဲတွေ တယ်ပြင်းထန်နေပါလား ၊
ဝိုင်းစု စကပ်တိုမှု တော့ မသိလိုက်ဖူးဗျို..
ဟန်နီဦး ရေကူးဝတ်စုံ တော့ ခင်ဗျား ပြောတဲ့ အွန်လိုင်း မဂ္ဂဇင်းကြီး က မြင်လိုက်ရ ၊ သိလိုက်ရပါတယ် ၊
ဟုတ်တာတွေရော၊ မဟုတ်တာတွေ ရောမွှေ
ပြီး ရေးနေတဲ့ ဌာနကြီးပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ မှန်တာတွေက များပါတယ် ၊ အဲ့ဒီ သတင်းဌာနကြီးကိုပဲ မြန်မာသတင်းတွေ အတွက် အားကိုးနေရတာပဲ ၊ ကျွန်တော်တော့ ကြိုက်တယ် ၊
ဝိုင်းစု စကပ်တိုမူ ---ပုံကို ပူးတွဲကြည့်ရူရန်
ဟန်နီဦး ရေကူးဝတ်စုံ -ပုံကို ပူးတွဲကြည့်ရူရန်
ဆိုရင် စာဖတ် ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း နှစ်ချိုက်ပါလိမ့်မယ်
ကြိုက်တယ်ဝေ့ ကိုပေါရဲ့ ကဗျာကို၊ နိုင်ငံတကာမှာ စစ်အစိုးရ မကောင်းတာ ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး လုပ်စားနေတဲ့ တိုက်ပွဲဝင်တို့ တော်လှန်ရေးသမားတို့ ဆိုတဲ့ အမည်ခံ တွေကိုလည်း ထပ်ပြီး ဒီလိုပြောင်မြောက်တဲ့ ကဗျာလေးတွေနဲ့ နှိပ်ကွပ်စမ်းပါဦးရှင်။
ဥပမာ ထိုင်းနဲ့ မလေးမှာဆိုရင် ဗမာပြည်မှာ ဘုရားကျောင်းတက်လို့မရဘူး၊ ဝတ်ပြုလို့မရဘူး ဘာညာ လျှောက်ပြောပြီး ဒုက္ခသည်ခံ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အမြိန့်သား ထောက်ပံ့ကြေးသွားယူနေတဲ့သူတွေ သွားယူဖို့ကြိုးစားသူတွေတစ်ပုံကြီးပဲ။ နောက်ပြီး စစ်တပ်ကိုလက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်ခဲ့ပြီး ရွာတွေမှာအပြစ်မဲ့ လူတွေကို ဗမာစစ်တပ်ကသတ်သလို သတင်းပေးခေါင်းစဉ်တပ်သတ်ဖြတ်မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ အဖွဲ့တွေထဲက အဖွဲ့ဝင်တွေလည်း ယူအန်ရဲ့ ဘာ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ မှ မညီညွတ်ပေမဲ့ ဂွင်ရိုက်ပြီးရောက်နေတာ တွေ့ရတယ်။ တချို့ဆိုထွက်သွားတုံးက ၁၀တန်းမအောင်ဘူး၊ ဟိုရောက်မှ ကျောင်းအလကားထားပေးလို့ နည်းနည်းလေးပညာတတ်လာတာနဲ့ တသက်လုံးပဲ ဟိုမှာ ကျောင်းတက်လာသလိုလို အောက်ခြေလွတ်နေကြသေးတယ်။ ဘလော့တွေဘာတွေ မမှီမကန်းလျောက်ရေးပြီး "အာ" နဲ့ လုပ်နေကြလေရဲ့။
နောက်တစ်အုပ်စုကတော့ ဘယ်သူကမှ မဲမပေးတော့ပဲ ရာသက်ပန် ဝန်ကြီးမင်းရာထူးခံထားသူတွေပေါ့၊ အသံတောင်ကောင်းကောင်းမအော်နိုင်တော့ဘူး၊ စားထားတာနင့်နေလို့။ မသေမချင်းတော်လှန်ရေးတွေလေ။ သူတို့အုပ်စုတွေအားလုံးကို စစ်အာဏာရူးတွေနဲ့ တတန်းတစားထဲသတ်မှတ်တယ်။ ဒင်းတို့တက်လည်း ကျမတို့ တိုင်းပြည် ဒုံရင်းပဲရှိမှာပဲ။
စစ်အုပ်စုကိုမဲနေကြတော့ သူတို့က ကြားထဲကလွတ်နေတာ။ ဒီလို ဒင်းတို့ကိုလည်း နှက်တဲ့ကဗျာမျိုးများများရေးနိုင်ပါစေ။
ဥပမာ ထိုင်းနဲ့ မလေးမှာဆိုရင် ဗမာပြည်မှာ ဘုရားကျောင်းတက်လို့မရဘူး၊ ဝတ်ပြုလို့မရဘူး ဘာညာ လျှောက်ပြောပြီး ဒုက္ခသည်ခံ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အမြိန့်သား ထောက်ပံ့ကြေးသွားယူနေတဲ့သူတွေ သွားယူဖို့ကြိုးစားသူတွေတစ်ပုံကြီးပဲ။
နောက်ပြီး စစ်တပ်ကိုလက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်ခဲ့ပြီး ရွာတွေမှာအပြစ်မဲ့ လူတွေကို ဗမာစစ်တပ်ကသတ်သလို သတင်းပေးခေါင်းစဉ်တပ်သတ်ဖြတ်မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ အဖွဲ့တွေထဲက အဖွဲ့ဝင်တွေလည်း ယူအန်ရဲ့ ဘာ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ မှ မညီညွတ်ပေမဲ့ ဂွင်ရိုက်ပြီးရောက်နေတာ တွေ့ရတယ်။
I have seen some ex-KNU combatants
who has killed people in Burma now settled in 3rd countries.
တချို့ဆိုထွက်သွားတုံးက ၁၀တန်းမအောင်ဘူး၊ ဟိုရောက်မှ ကျောင်းအလကားထားပေးလို့ နည်းနည်းလေးပညာတတ်လာတာနဲ့ တသက်လုံးပဲ ဟိုမှာ ကျောင်းတက်လာသလိုလို အောက်ခြေလွတ်နေကြသေးတယ်။
Well most of them are pursuing just bachelor or honours degrees
or MA or PhD in specializations
such as respecting human rights, dog rights, dick rights, and fag rights, etc.. one can't get real jobs even if they can graduate.
I respect those bloggers like
Ko Paw who are in Singapore who
are leading professional lives while blogging....
Hi! Ko Paw I like ur poem that what i see the same view.I really appreciate it.I also like the poem THE CRAB SINCE BORN. BE HAPPY EVER,